Iindaba -I-Global polylactic acid (i-PLA) yemeko yentengiso kunye nohlalutyo lwethemba ku-2020, ithemba lesicelo esibanzi kunye nokwandiswa okuqhubekayo kwamandla emveliso
I-Global polylactic acid (i-PLA) yemeko yentengiso kunye nohlalutyo lwethemba ngo-2020, ithemba elibanzi lesicelo kunye nokwandiswa okuqhubekayo kwamandla emveliso
I-Polylactic acid (i-PLA) luhlobo olutsha lwezinto ezisekwe kwi-bio, ezisetyenziswa kakhulu kwimveliso yempahla, ulwakhiwo, unyango kunye nempilo kunye nezinye iinkalo. Ngokuphathelene nonikezelo, amandla emveliso kwihlabathi liphela ye-asidi ye-polylactic iyakuba malunga neetoni ezingama-400,000 ngowama-2020. Okwangoku, iMisebenzi yeNdalo yase-United States lelona lizwe livelisa kakhulu, linamandla okuvelisa angama-40%;
Ukuveliswa kwe-asidi ye-polylactic kwilizwe lam kusesebusaneni. Ngokwemfuno, kwi-2019, intengiso ye-asidi ye-polylactic acid ifikelele kwi-660.8 yezigidi zeedola zase-US. Kulindeleke ukuba imakethi yehlabathi igcine i-avareji yokukhula komyinge we-7.5% ngexesha le-2021-2026.
1. Amathemba okusetyenziswa kwe-polylactic acid abanzi
I-Polylactic acid (i-PLA) luhlobo olutsha lwezinto ezisekwe kwi-bio ezine-biodegradability elungileyo, ukungqinelana kwezinto, ukuzinza kwe-thermal, ukumelana nokunyibilika kunye nokusebenza ngokulula. Isetyenziswa ngokubanzi kwimveliso yempahla, ulwakhiwo, kunye nonyango kunye nonyango kunye nokupakisha ibhegi yeti. Esinye sezicelo zokuqala zebhayoloji eyenziwayo kwicandelo lezinto
2. Ngo-2020, amandla emveliso ye-asidi ye-polylactic acid aya kuba malunga neetoni ezingama-400,000
Okwangoku, njengezinto ezinobungozi bendalo ezisekwe kwindalo esingqongileyo, i-polylactic acid inethemba elifanelekileyo lesicelo, kwaye amandla emveliso yehlabathi ayaqhubeka ukwanda. Ngokwezibalo ezivela kwi-European Bioplastics Association, kwi-2019, amandla emveliso ye-polylactic acid malunga ne-271,300 yeetoni; Ngo-2020, amandla emveliso aya kunyuka aye kwiitoni ezingama-394,800.
3. I-United States “Imisebenzi Yendalo” ngoyena mvelisi mkhulu ehlabathini
Ngokwembono yamandla emveliso, imisebenzi yendalo yaseMelika okwangoku yeyona mveliso inkulu ye-asidi ye-polylactic. Kwi-2020, inamandla emveliso yonyaka ye-160,000 yeetoni ze-polylactic acid, ebala malunga ne-41% yamandla eemveliso zehlabathi, ilandelwa yiTotal Corbion yaseNetherlands. Umthamo wemveliso ziitoni ezingama-75,000, kwaye amandla emveliso enza i-19%.
Kwilizwe lam, imveliso ye-polylactic acid isesencinci. Akukho migca mininzi yemveliso esele yakhiwe kwaye yafakwa ekusebenzeni, kwaye uninzi lwazo lincinci kwinqanaba. Ezona nkampani ziphambili zemveliso zibandakanya uJilin COFCO, Hisun Bio, njl.
4. 2021-2026: Umyinge wokukhula kwenqanaba leemarike ngonyaka kuya kufikelela kwi-7.5%
Njengohlobo olutsha lwezinto ezinokuthotywa nokusingqongileyo, i-polylactic acid ibonakaliswa ngokuba luhlaza, inobuhlobo kwindalo, ikhuselekile kwaye ayiyityhefu, kwaye inethemba lesicelo ebanzi. Ngokwezibalo ezivela kwiNgxeloLinker, kwi-2019, intengiso ye-asidi ye-polylactic acid ifikelele kwi-US $ 660.8 yezigidi. Ngokusekwe kulindelo olubanzi lwesicelo, imakethi iya kugcina umyinge wokukhula komyinge wonyaka we-7.5% kwisithuba se-2021-2026, kude kube ngu-2026.
Zhejiang Tiantai Jierong New Material Co., Ltd. izibophezele isicelo pla kumzi mveliso ibhegi iti, ngokubonelela abasebenzisi uhlobo olutsha non-ityhefu, esha kunye degradable ibhegi iti kumava okusela iti ezahlukeneyo.
Ixesha lokuposa: Jul-15-2021